English...စကားပြေား အခြေခံ လေ့လာချင်သူတွေအတွက်...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ENGLISH SPEAKING လေ့လာနေသူတွေအတွက် အထောက်ကူပြုတဲ့ အခြေခံစကားပြေားနည်း လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!MP3 ဖိုင်လေးတွေပါ...! Software မဟုတ်ပါဘူး...!ဒေါင်းလော့လုပ်ပြီး Zip ဖိုင်လေးကိုဖြေလိုက်ရင် လေ့လာလို့ရပါပြီ...! ဖိုင်ဆိုဒ်တွေကကြီးနေလို့ နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်...!လေ့လာချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်....!
" PART 1... "
" PART 2..." အသိပညာ အတက်ပညာ တိုးပွားနိုင်ပါစေ..!
No Response to "English...စကားပြေား အခြေခံ လေ့လာချင်သူတွေအတွက်...!"